श्रमिक दिवस र नेपाली श्रमिकको भविष्य - Samata Foundation
by Rampukar Maharain विचार
श्रमिक दिवस अर्थात् मे १ लाई विश्वभर मजदुर दिवसका रूपमा मनाइन्छ। सिकागोको हेमाक्रेटामा सन् १८८६ को नरसंहारमा मारिएका मजदुर र आममानिसको सम्झनामा यस दिवसलाई मनाइने गरिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा श्रम बहसको इतिहास त्यति लामो छैन। वि.सं. १९१० सालको ऐनभन्दा पहिले हिन्दु शास्त्रसम्मत नियम थियो। त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे। उनीहरूलाई तलब दिँदा जिन्सी, अनपात दिने चलन थियो।
वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनअन्तर्गत खेताला, भरियालाई रोजको १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्याउन लगाउँदा ६ पैसा ज्याला दिने, कर्मचारी, जंगी, गैर जागिरदारका लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो। २००७ सालको संविधानमा मजदुर, स्त्रीलाई बलपूर्वक, बालबालिकालाई कलिलो उमेरलाई दुरूप्रयोग गर्नु नहुने जस्ता कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्घान्तअन्र्तगत राखिएको थियो।
हालसम्म १ सय ७२ वटा देशहरूसँग नेपालको श्रम स्वीकृति रहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदन अनुसार १६ लाख ४० हजार ६ सय ९६ जना रोजगारका निम्ति विदेशिएका छन्। नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, लगानी सुरक्षित नहुँदा खाडीको ५२ डिग्रीको तापक्रममा नेपालका गरिब र अतिविपन्न दाजुभाइ , दिदीबहिनी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर श्रम गरिरहेका छन्।
दैनिकजस्तो २-३ वटा शव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिने गरेको तथ्यले बयान गरिरहेको छ। नेपालमा अधिकांश र निमन मध्यम वर्गको जीविकोपार्जन रेमिट्यान्समा निर्भर छ। रेमिट्यान्सको भरमा छोराछोरी महँगो स्कुलमा पढाएका छन्, गाउँबाट सहरमा बस्न थालेका छन्।
बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन्। अहिले विश्वभर कोरोनाको कहर छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार लाखौंले रोजगार गुमाउँदै छन्। अमेरिकामा मात्र अप्रिलसम्म आइपुग्दा १५ प्रतिशत मानिस बेरोजगार भएका छन्। यस्तो अवस्थामा लाखौँ नेपाली युवा स्वेदश फर्कंदै गर्दा राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ? रेमिट्यान्सको ६० प्रतिशत निम्न र मध्यम वर्गमा पुग्ने परिवारको जीवनयापन कसरी हुन्छ?
कोरोनाको यस्तो समयमा अब मानिस यात्रा गर्ने देखिँदैनन्, त्यसकारण ट्राभल एजेन्सी र त्यहाँ काम गर्ने कामदारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने ६० हजारभन्दा बढी कामदार समस्यामा पर्ने देखिएको छ। यसरी मानिस बेरोजगार हुँदा लाखौँ युवा स्वदेश फर्कंदा रेमिट्यान्समा गिरावट आउँछ, बैकिङ क्षेत्र, कलकारखाना, उद्योग, होटल व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सीहरू, इँटा उद्योग, निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव पर्दा यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव श्रमिकहरूलाई पर्ने जान्छ।
विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्दै गर्दा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा ठूलो धक्का पुग्नेछ।
अहिले हरेक अनुहारमा एउटै प्रश्न छ- लकडाउन कहिले खुल्छ? सरकारले लकडाउनको विकल्प किन खोजिरहेको छैन। किन श्रमिकको समस्यालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन? विदेशमा रहेका कामदारको आवाज किन सुनिरहेको छैन? के विदेशमा काम गर्ने वर्ग रेमिट्यान्सको लागि मात्र हो? महाकालीमा अलपत्र रहेका श्रमिकले राज्यसँग के अपेक्षा राख्ने? स्वदेश फर्कने श्रमिकलाई राज्यले अब कसरी सम्बोधन गर्छ, कस्तो कार्यक्रम ल्याँउछ? कोरोनापछिको वातावरण कस्तो हुन्छ? श्रमिकले काम गर्ने वातावरण फेरि बन्ला?
Published on Nepal News
Previous Linkमधेसी दलित महिला भन्छिन्- १७ वर्षमै तेस्रोपटक गर्भवती भएँNext Linkछुवाछुतमुक्त राष्ट्रमा अन्तरजातीय प्रेम किन वर्जित ?